Jereo ny Distrika Mazava Mena malaza any Amsterdam | Vaovao momba ny dia
La fitsidihana ny Distrikan'ny Jiro Mena any Amsterdam tsy maintsy atao izany raha mankany an-tanàna isika. Azo antoka fa tsy fitsidihan'ny mpizahatany hatao toy ny fianakaviana izany, satria io no tanàna malaza indrindra manerantany amin'ny fivarotan-tena ara-dalàna. Miorina amin'ny faritra afovoan'ny tanàna izy io ary mpizahatany an'arivony isan-taona, samy liana amin'ny fahalianana na olona te hanandrana ireo serivisy natolotra.
Handeha isika fantaro kely kokoa ny Distrikan'ny Jiro Mena malaza any Amsterdam, izay mahazendana tokoa ilay fotokevitra malala-tanana izay nanaovan'izy ireo asa ara-dalàna efa antitra nefa nohamafisina toy ny fivarotan-tena. Saingy betsaka kokoa noho izany ity faritra manodidina ity, satria mpizahatany be dia be koa misy toerana fialamboly hafa.
1 Tantaran'ny Distrika Mazava Mena
2 Aiza no misy azy
3 Inona no jerena ao amin'ny Distrika Jiro Mena
4 Fitsidihana hafa eo akaiky eo
Tantaran'ny Distrika Mazava Mena
Mba hahatongavana any amin'ny Distrikan'ny Jiro Mena araka ny fantatra ankehitriny, miaraka amin'ny lalàna momba ny fivarotan-tena ankehitriny, dia dingana maro no noraisina. Efa tamin'ny taona 1413 dia namoaka lalàna milaza fa ilaina ny mpivaro-tena any amin'ny tanàna lehibe, manaiky an'io ampahibemaso io asa io. Tamin'ny 1810, niaraka tamin'ny fanafihan'ny frantsay, dia nandeha lavitra kokoa izy io, nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nekena ny fivarotan-tena nefa tsy nasiana lalàna na voafehy. Miaraka amin'ny fananiham-bohitra frantsay dia natsangana ny lalàna mifehy ny mpiasa rehetra karazana toy izao hisoratra anarana amin'ny polisy ary hanao fizaham-pahasalamana.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nipoitra ny trano fivarotan-tena, amin'ny fomba iray, azo trandrahana ny mpiasa, noho izany ny fivarotan-tena dia nahatonga fandavana manokana. Amin'ny taona Voarara ny trano fivarotan-tena tamin'ny 1911, na dia afaka nanatanteraka ny asany tsy nisy valifaty aza ireo mpivaro-tena avy amin'ny fanjakana. Natao hampitsaharana ireo nanararaotra ireo mpiasa ho tombontsoany manokana izany. Izany dia nahatonga ny mpiasa hifantoka amin'ny faritra sasany, monina ao aminy, izay ho fiandohan'ny Distrikan'ny Jiro Mena. Tamin'ny taona enimpolo sy fitopololahy dia efa nalaza be tamin'ny mpiara-miasa aminy sy amin'ny fahalalahana ara-nofo ity faritra ity. Tamin'ny taona 2000, nofoanana ny lalàna mandrara ny trano fivarotan-tena, fa ho setrin'izany dia tsy maintsy mandany fahadiovana henjana sy fifehezana ara-dalàna izy ireo mba hialana amin'ny fanararaotana tsy ara-dalàna.
Aiza no misy azy
Ity faritany malaza ity dia misy ao afovoan-tanànan'i Amsterdam. Eo ankavanan'ny Central Station no misy azy. Izy io koa dia fantatra amin'ny anarana hoe Red Light na Rosse Buurt. Izy io dia manana distrika telo, De Wallen, Ruysdaelkade ary Singelgebied. Any amin'ny faritra tranainy indrindra amin'ny tanàna izy io, izay nisy tranon'ireo mpanjono taloha, izay miorina amin'ny digue izay noforonina hiarovana ny tanàna amin'ny fisondrotan'ny ranomasina. Ny faritry Dam dia malaza sy ny Damrak Street no manodidina azy.
Inona no jerena ao amin'ny Distrika Jiro Mena
Ny fisarihana mpizahatany eto amin'ity tanàna ity dia tsy isalasalana fa ny trano fivarotan-tena sy ny trano anaovana fampirantiana hahazoana ny mpanjifa isan'andro. Manoro hevitra anao ny hijery ny manodidina anao amin'ny alina, satria amin'ny antoandro dia maro amin'ireo varavarankely fivarotana malaza no mihidy, satria tsy dia be loatra ny mpanjifa. Amin'ny alina ny Distrikan'ny Jiro Mena dia mifanaraka amin'ny anarany ary feno jiro neon manambara ireo trano fivarotan-tena, loko ary jiro eo am-baravarankely izay sokafana hiseho amin'ireo mpiasa.
Androany ity faritra ity dia toerana lamaody, na dia am-polony taona maro lasa izay dia tsy dia noraisina. Tsy toerana mampidi-doza mihitsy izany Ary mila mitandrina fotsiny ianao amin'ny mpangarom-paosy izay manararaotra ireo mpizahatany marobe hangalarana, saingy zavatra mitranga any amin'ny tanàna lehibe izany.
Eto amin'ity faritra ity dia azonao atao ihany koa tadiavo ireo fivarotana kafe malaza ahafahanao mifoka sigara ary koa trano fisakafoanana na fisotroana hisotro amin'ny alina miaraka amin'ny rivo-piainana velona. Fahita ny mahita ihany koa ny Sex Shops, izay efa anisan'ny tolotra fizahan-tany eo amin'ny manodidina.
Tokony ho raisina an-tanana amin'ity tanàna ity izany ny mpivaro-tena dia tsy azo horaketina sary na fakana sary, zavatra izay raisina am-pahamatorana tokoa. Ary koa, ho fanajana azy ireo dia zavatra tsy tokony hatao. Etsy ankilany, tsy tokony hividy zavatra amin'ireo mpaninjara ao amin'ilay faritra ianao, satria tsy ara-dalàna izany ary mety hahita olana isika.
Fitsidihana hafa eo akaiky eo
Ny Distrika Jiro Mena dia toerana afovoany tokoa, noho izany dia afaka mijanona isika aorian'ny fitsidihana ireo toerana hafa manodidina. ny ny halaviran-tongotra dia ny fiangonana Oude Kerk, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Io no trano tranainy indrindra ao an-tanàna ary ao anatin'ny Distrikan'ny Jiro Mena no misy azy. Noho ny hetsika iconoclastic dia navela tsy nisy haingon-trano ny ao anatiny ka tena matotra. Misongadina ireo varavarankely fitaratra miloko sy ilay taova lehibe.
Vetivety dia lavitra koa ny tranombakoka Amstelkring, iray amin'ireo tranainy indrindra, ary ao anatiny dia misy fiangonana iray izay klandestine tamin'ny androny. Akaikin'ny manodidina ihany koa ny fmalaza Dam Square na ny Rembrandt Museum.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Amsterdam » Distrikan'ny Jiro Mena any Amsterdam